SARUDZA MUTAURO Afrikaans Albanian Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Azerbaijani Basque Bislama Catalan Cebuano ChiTetun Dili Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chirungu Chitonga Chitumbuka Chol Croatian Czech Danish Dutch Estonian Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Galician Georgian German Greek Gun Haitian Creole Hebrew Hiligaynon Hungarian Iban Icelandic Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Javanese Kamba Kannada Kazakh Kinyarwanda Kirghiz Kongo Korean Lari Lingala Lithuanian Luganda Luo Luvale Malagasy Malay Malayalam Mingrelian Mutauro Wemasaini wechiFrench Mutauro Wemasaini wechiSpanish Mutauro Wemasaini wokuAmerica Mutauro Wemasaini wokuArgentina Mutauro Wemasaini wokuBrazil Mutauro Wemasaini wokuGermany Mutauro Wemasaini wokuItaly Mutauro Wemasaini wokuMexico Myanmar Norwegian Oromo Pangasinan Persian Pidgin (West Africa) Polish Portuguese (Brazil) Portuguese (Portugal) Romanian Russian Sango Serbian (Cyrillic) Serbian (Roman) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Spanish Sunda Swahili Swedish Tagalog Tamil Thai Turkish Twi Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Valencian Vietnamese Yoruba Zulu
Audio Nzira dzokudhaunirodha zvakarekodhwa Musikana Akadzorera Bhegi Raakanhonga
Danielle, mumwe weZvapupu zvaJehovha anogara kuSouth Africa, akanhonga bhegi rakanga rasiyiwa nemumwe munhu muresitorendi inotengeswa kofi. Mubhegi racho maiva nemari nemakadhi ekubhengi. Neshungu dzekuda kudzorera bhegi kumuridzi waro, Danielle akatsvaga nhamba dzefoni kana nhamba dzepanogara munhu wacho asi akangowana zita remumwe murume chete. Akaedza kutaura nevekubhengi remurume uyu kuti vamubatsire kumuwana asi zvakashaya basa. Danielle haana kukanda mapfumo pasi. Akabva afona panhamba dzachiremba dzaakawana parisiti yaiva mubhegi racho. Vekwachiremba vakabvuma kupa murume akanga asiya bhegi nhamba dzaDanielle.
Murume uya akashamiswa paakafonerwa nemunhu aishanda kwachiremba wake, achimuudza kuti Danielle aida kumupa bhegi rake raakanga anhonga. Paakauya kuzoritora, akawana Danielle aina baba vake. Vakashandisa mukana wacho kumuudza kuti nei vakanga vaita zvese zvavaigona kuti vamuwane. Vakatsanangura kuti seZvapupu zvaJehovha, vanoedza kurarama zvinoenderana nezvinotaurwa neBhaibheri. Ndosaka nyaya yekutendeseka nguva dzese ichikosha zvakanyanya kwavari.—VaHebheru 13:18.
Kwapera maawa mashomanana, murume uya akatumira Danielle nababa vake meseji, achivatenda nekudzorera kwavanga vaita bhegi rake nechikwama. Akanyora kuti: “Ndinotenda chaizvo kunditsvaga kwese kwamakaita. Ndakafara kuona mhuri yenyu uye ndicharamba ndichiyeuka rudo rwenyu nemufaro. Kuratidza kutenda kwangu ndinoda kukupai chipo. Ndinozviziva hangu kuti munoshandisa zvinhu zvenyu kuti munamate Mwari. Zvamunoita zvinopupurira kuti muri vanhu vakanaka. Ndazvionera ndega kubva pakutendeseka kwaDanielle. Saka ndinodzokorora zvakare kuti makaita henyu, Mwari ngaakomborere basa renyu.”
Kwapera mwedzi mishomanana, baba vaDanielle vakaonana zvakare nemurume uya, ndokubva avaudza zvakanga zvichangobva kuitika kwaari. Ainge aenda kumbonotenga-tenga ndokubva anhongawo chikwama chakanga chadonhedzwa pasi. Paakawana mukadzi akanga adonhedza chikwama chiya, akamudzorera chikwama chacho. Akabva atsanangura kuti kudzorerwa kwaakaitwa bhegi raakanga arasa ndiko kwaita kuti adewo kudzorera chikwama chaakanga anhonga. Akati: “Ukaitirwa zvakanaka nemumwe munhu kunyange zviri zvidiki, zvinoita kuti uzoitirawo vamwe zvakanaka, uye zvinoita kuti vanhu vagarisane zvakanaka.”
Vanhu vakawanda vanonyepa kamwe chete pamaminitsi 10 ega ega pavanenge vachitaura. Nei uchifanira kuva munhu akatendeseka?
Pane nzira dzakawanda dzatinobatsira nadzo vanhu vomunharaunda dzinosanganisira panguva yenjodzi, pakudzidzisa kuverenga nokunyora uye pakubatsira pane zvokunamata.
Tumirawo vamwe Tumirawo vamwe Musikana Akadzorera Bhegi Raakanhonga
ijwex nyaya 12